धराशायी बन्दै जडीबुटी व्यवसाय | गृहपृष्ठ
Home बजार धराशायी बन्दै जडीबुटी व्यवसाय
on: May 23, 2019 बजार
नेपालगञ्ज । भारतले क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गरेपछि नेपाली जडीबुटी व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारले भारतसँग उच्चस्तरमा कुरा नगरिदिँदा जडीबुटी व्यवसाय नै धराशायी भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
भारतले बोट बिरुवा र तिनका अंशको आयातलाई व्यवस्थित गर्न विरुवा क्वारेन्टाइनसम्बन्धी आदेश २००३ जारी गरी सोको अनुसूची ७ मा सूचीकृत जडीबुटीमात्रै निर्यात गर्ने जनाएपछि नेपालबाट निकासी हुने धेरै जडीबुटी त्यो सूचीमा नपर्दा निकासी हुन नसकेको हो । कतिपयको सूचीमा नाम मिलेता पनि वैज्ञानिक नाम नमिल्दा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मो. याकुव अन्सारीले बताए ।
नयाँ कानूनअनुसार, २६ मात्रै जडीबुटी सूचीकृत भएपछि अरु जडीबुटीको निकासी रोकिएको हो । पषाणवेद, कुरिलो (सतावर), आमला, पदमचाल, चिराइतो, अमलवेद, अतिष, कालादाना र सिकाकाइ लगायतका जडीबुटीको गत मङ्सिरदेखि निकासी रोकिएको छ । अध्यक्ष अन्सारीका अनुसार, नेपालगञ्ज नाकाबाट निकासी हुने रू. १० अर्ब बढीको जडीबुटी बाँकेमा अलपत्र परेको छ ।
नेपालबाट करीब ८० प्रकारका जडीबुटी भारत निकासी भइरहेका थिए । बोझो, कपुर, दालचिनी, काउलो पाउडर, कुट्की, रीठा, टिमुरको पनि वैज्ञानिक नाम नमिल्दा निकासी रोकिएको छ । मङ्सिरदेखि नै निकासी नहुँदा करीब १ हजार ५ सय मेट्रिक टन जडीबुटी नेपालगञ्जमा थन्किएको छ । देशभरमा करीब १० हजार मेट्रिक टन जडीबुटी रोकिएको अध्यक्ष अन्सारीले जानकारी दिए ।
जडीबुटी व्यवसायी रवीन्द्रनाथ शुक्लाले तत्कालै निकासी हुन नसके जडीबुटी कुहिने र गुणस्तरमा ह्रास आउने बताए । उनले जडीबुटी निकासी ठप्प हुँदा संकलन र विक्री वितरणमा संलग्न करीब २५ लाख नेपाली प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको र व्यवसायी नै धराशायी हुन पुगेको उल्लेख गरे ।
भारतले ट्रान्जिट पास, नयाँ कानून लागू गरेपछि नेपालबाट जडीबुटी निकासी वर्षेनी घट्दो अवस्थामा छ । रासस